Nayakhabar.com: सरकारबाट हटेपछि चित्रबहादुरको प्रतिक्रियाः ‘पिँजडाबाट उम्केको चरी जस्तै अनुभव गर्दैछु’
सरकारबाट हटेपछि चित्रबहादुरको प्रतिक्रियाः ‘पिँजडाबाट उम्केको चरी जस्तै अनुभव गर्दैछु’
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले सरकारबाट बाहिर बस्दा आफूलाई हाईसञ्चो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको मन्त्रीहरूका नाजायज निर्णयको साक्षी बस्दा आफूलाई पीडाबोध भएको उनले बताए ।
‘म देशको माटो जोगाउन मात्र मन्त्री परिषद्मा गएको थिएँ । म एक्लैले कति गर्न सकें, त्यसको लेखाजोखा गरौंला । तर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुका घृणीत काम देखेर मन्त्री पदप्रति नै वितृष्णा जागेर आयो, उनीहरुका क्रियाकलापले म वास्तवमा लज्जित छु,’ केसीले भने । बर्षौं देखि सत्ताको रस चुस्न पल्केका व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्ण निर्णयको साक्षी बस्नुपर्दा आफूलाई अहिले पनि पीडाबोध भइरहेको उनले बताए । उपप्रधानमन्त्री हुँदा राज्यकोषको कसरी लुट हुँदो रहेछ भनेर आफूले धेरै थोक देखेको तर त्यसको वेलीविस्तार लगाउन समय लाग्ने उनले बताए ।
‘मन्त्रीपदबाट हटेपछि अहिले मलाई हलुका र शीतल भइरहेको छ । कम्तीमा अनियमित काम गरेको देख्नु परेको छैन,’ केसीले सुनाए । ‘टेम्पोमा फर्किएँ’ भर्खरै राजनीतिमा आएका ‘नवप्रवेशी’हरु महंगा गाडी चढे पनि पटक –पटक सांसद र पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका केसी पुनः टेम्पो चढ्न थालेका छन । ‘मन्त्रीको गाडि भन्दा जनतासंग टेम्पोमा हिंडदा आनन्द महसुश भयो,’ केसीले भने, टेम्पोमा चढ्दा फोटो खिच्ने र अन्तर्वार्ता लिनेको भीड लाग्यो ।’ अब गाडि किन्ने होला नि ? भन्ने सवालमा केसीले भने, ‘के को पैसाले किन्ने ? म सरकारमा लूट्न गएको थिएँ र गाडी किन्नलाई ’ उनले आफूलाई विलासी गाडि चढ्ने कुनै शोख नभएको बताए । पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटर छोडे लगत्तै केसी घट्टेकुलोस्थित पुरानै डेरामा फर्किएका छन् । ‘
नौ महिना देखि भाडा तिरेर राखेको थिएँ, मलाइ कोठा नै प्यारो’ उनले भने, ‘गलत निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको भए घर आउँथ्यो होला, जुन मेरा लागि आत्महत्या सरह हुन्थ्यो ।’ ओली साहशी प्रधानमन्त्री नेता केसीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली साहशी भएकै कारण चीनसँंग पारवहन सम्झौता सम्भव भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीमा केही गरौं भन्ने सोच थियो, तर एमाले भित्रबाटै ओलीलाई असहयोग भयो,’ केसीले भने, ‘कहिले अब बाँध फेर्ने बेला भयो भनेर झलनाथले भने, कहिले माधव नेपाल बोले, ओलीविरुद्ध एमालेमा औडाहा थियो ।’
नेता केसीले आफू सरकारमा रहुन्जेल प्रधानमन्त्री ओलीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताए । ‘सायद प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि मजस्तो निश्वार्थी नेताको आड भरोसा चाहिएको थियो । त्यसैले मैले संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्दा पनि उहाँले केही भन्नु भएन ।’
नेता केसीले भविष्यमा आफू मन्त्री नबन्ने बताए । ‘पार्टी सरकारमा जाने समयमा पनि मैले सरकारमा जान्न भनेको थिएँ, तर साथीहरुले म नगए निर्णयमा पुनर्विचार हुन्छ भनेपछि गएको थिएँ,’ केसीले भने, मन्त्री पदसँग मोह भंग भएको छ । अब मलाई मन्त्री बन्नु छैन ।’